Sida Loo Sameeyo Daboolida Majaladda Hal-abuurka leh: Tilmaamaha Nakhshad | Hal-abuurka khadka tooska ah
Xigasho: Fashion United
Mar kasta oo aan u baahanno nooc madadaalo ah, waxaan helnaa mid u muuqda inuu ku yaal gees kasta oo meelo kala duwan ah: kafateeriyada, hoteelada, timo-jaraha, iwm. Waxa aynu u akhrinay nuxurka ay hayaan ama waxa dareenkeena soo jiitay fariinta iyo habka ay u gudbinayaan labadaba.
Haddii aad weli la yaaban tahay waxa aan ka hadleyno, waxaan shaki ku jirin in ay tahay majaladaha. Hagaag, maxaan aadka ugu xiisaynaynaa inaad ku barato qoraalkan? Waa hagaag, Waxaan mar kale ku soo bandhigi doonaa naqshadeynta tifaftirka iyo sidoo kale, waxaan dooneynaa inaan ku quusinno adduunka cajiibka ah ee joornaalada.
Taasi waa sababta qoraalkan aan ku sharxeyno waxa ay yihiin waxaanan kuu soo jeedin doonaa talooyin aad ku naqshadeyso daboolka joornaalka ugu hal-abuurka iyo farshaxanka ah. Haddii aad diyaar u tahay, aan bilowno.
1.1 Tiro yar oo taariikh ah
1.2 Astaamaha guud
1.3 xubno majaladaha
2 Samee dabool hal abuur leh
2.0.1 Haddii ay gaaban tahay, ka sii fiican
2.0.2 Samee imtixaano kala duwan
2.0.3 Shaqaalayso agabka naqshadaynta
2.0.5 Samee tijaabooyin daabac
Majaladda waxaa lagu qeexaa sida xayaysiis dhexdhexaad ah oo offline ah oo hadda onlayn ah, tan iyo markii horumarinta tignoolajiyada ay suurtogal u ahayd in la abuuro joornaalada iyada oo loo marayo hababka elektaroonigga ah: tablets, kombiyuutarada, iwm. Laakiin dhammaan ka sarreeya, waxaa sidoo kale lagu qeexay inay tahay mid ka mid ah hababka daabacaadda daabacaadda ugu horreeya ama dhexdhexaadinta daabacaadda.
Shaqadeeda ugu weyn waa tan wargeli oo u gudbi fariinta qofka qaata, Kaas oo xaaladdan uu yahay akhristaha majaladda. Hadda waxa jira noocyo badan oo joornaal ah, mid kasta oo iyaga ka mid ah waxaa loo kala saaraa sida ay u qoran tahay ama, waxa ay u gudbiyaan kuwa kale.
Joornaalka sida aan u naqaanno Waxay ka timid dalal ay ka mid yihiin Jarmalka, Faransiiska iyo Talyaaniga 1663kii. Wargeysyadu waxay ahaayeen kuwa ugu wanaagsan ee ku guulaysta wargeysyada hore u jiray wakhtigaas waxayna ahaayeen warbaahin xayaysiis ah oo daabacan.
Taariikhda oo dhan, majaladaha ayaa noqday kuwa loogu isticmaalka badan yahay warbaahinta maadaama ay ahaayeen nooc maaweelo ah oo wanaagsan iyo in laga war hayo. Taasi waa sababta, xilliyada dagaalka, qoysaska askarta ka qaybqaatay dagaallada lagu wargelin jiray daabacaadda noocaan ah.
Si kastaba ha ahaatee, maanta waxay weli yihiin mid ka mid ah warbaahinta ugu caansan.
Wargeysyadu waxay ka kooban yihiin astaamo guud oo taxane ah oo siinaya shakhsiyadda lagama maarmaanka u ah inay ka mid noqdaan warbaahinta loogu isticmaalka badan yahay bulshada maanta.
Maxaa lagu sifeeyaa majaladaha oo aad u badan waa in ay jiraan tiro badan oo tifaftirayaasha ah kuwaas oo qora macluumaadka lagama maarmaanka ah si Dadweynuhu waxay awoodaan oo kaliya inay fahmaan macluumaadka ay u baahan yihiin, yacni, fariintu waa inay ahaataa mid cad oo kooban oo laga bilaabo ciwaanka koowaad ilaa barta iyo dhamaadka cutubka u dambeeya.
Sida kor lagu sheegay, waxay ka kooban yihiin wax ka badan hal nooc waxayna ku xiran tahay sida ay yihiin, waxay gaari doonaan dhageystayaal kale ama mid kale. Taasi waa sababta ay u jiraan majaladaha ka hadla xayawaanka, bulshada maanta, ciyaaraha, shaleemada iyo sawirada, naqshadeynta iyo farshaxanka, farsamada, iwm. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waxaa loo qaabeeyey qaab la fahmi karo oo ku habboon dabeecadda mawduuca la horumarinayo.
Waxa naqshadeeyaha ama qoraagu isku dayayo inuu sameeyo, Waxaa hubaal ah in ay soo jiidanayso dareenka dadweynaha Oo sidee bay ku samayn karaan fariin fudud? maadaama ay jiraan dhowr foom, nashqadeeyaha ayaa rafcaan u qaadan doona walxaha garaafyada muuqaalka ah ee ka kooban naqshadeynta: qoraallada, sawirada, sawirada, foomamka aan la taaban karin ama gestaral, khadadka garaafyada, iwm. Halka tifaftiruhu uu masuul ka noqon doono raadinta cinwaan ururinaya dhammaan macluumaadka lagu soo bandhigi doono majaladda dhexdeeda oo u beddeli doona hal ama laba kelmadood. Waxaa lagu talinayaa in ciwaanku uu ahaado mid gaaban intii suurtagal ah maadaama uu kooban yahay, inta badan ee uu soo jiito akhristaha.
Si loo naqshadeeyo joornaalka, waxaa lagama maarmaan ah in aad tixgeliso mid kasta oo ka mid ah walxaha joornaalka, tan, waxaan abuurnay liis kooban oo ay ku jiraan kuwa ugu caansan iyo kuwa ugu badan ee joornaalada maanta.
Ciwaanka iyo qoraal hoosaadyada: Cinwaanka iyo qoraal hoosaadka ayaa noqon doona waxa ugu horreeya ee dadwaynuhu arkaan tan iyo markii ay ku yaalliin jaldiga joornaalka. Caadi ahaan waa kuwo gaaban oo fudud. oo ku soo koob mawduuca majaladda dhawr kelmadood. Inta yar ayaa ka wanaagsan.
Nambarada iyo taariikhda: Waa muhiim in dhammaan boggaga la nambariyo maadaama sidaas darteed uusan daawadeyaashu ku dhex lumin iyo tixraac sida waxa ku jira loo qaybiyo iyo halka mid kasta oo iyaga ka mid ah ku yaal. Taariikhda daabacaada had iyo jeer waxay ku taal meesha ugu sareysa, inkastoo wargeysyada qaar ay soo bandhigaan xagga hoose. Waa taariikhda majaladda la daabacay.
Magaca tifaftiraha iyo buug-gacmeedyada: Magaca tifaftiruhu waa muhiim mar haddii isaga ama iyadu ay u xilsaaran tahay naqshadaynta majaladda iyo waxa ku jira, sidaa darteed, waa lagu xisaabtamaa oo inta badan waxay ku taal far yar geesaha qaarkood ama xagga sare.
Qaybaha sawirka: Waa mid ka mid ah walxaha ugu muhiimsan maadaama ay qayb ka yihiin shaqada naqshadeeyaha, ayaa mas'uul ka ah qaybinta walxahan joornaalka si ay shacabka usoo jiitaan. Cutubyadani waxa ay ka soo jeedaan qoraal-qoraal, sawirro, sawirro, qaabab joomatari, iwm.
Samee dabool hal abuur leh
Qaybtan boostada, waxaan ku tusi doonaa talooyin ay tahay inaad maskaxda ku hayso markaad naqshadaynayso dabool. Taasi waa sababta ay lagama maarmaan u tahay inaad ku xisaabtanto iyaga maadaama ay yihiin saldhigga tifaftirka hadda iyo naqshadeynta garaafka.
Haddii ay gaaban tahay, ka sii fiican
Sidii aan horay u soo sheegnay, wax kasta oo ku saabsan qoraalka waa inay ahaadaan kuwo kooban oo suurtogal ah, sida hal-ku-dhigyada xayeysiiska, waa inay raacaan qaab la mid ah marka la abuurayo cinwaan wanaagsan, A. cinwaan soo jiidanaya daawadayaasha Oo ha ku lumin xogta intaa le'eg. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in aan la dhaafin lixda kelmadood ee lagama maarmaanka ah.
Samee imtixaano kala duwan
Sida naqshadeeye kasta, waxaad u baahan tahay inaad sameyso sawir-gacmeedyo kala duwan wax kasta oo aad qabato, hadday tahay cinwaannada, sida xulashada xarfaha ama imtixaannada midabka. Ha bilaabin tacaburnimada adigoon marka hore isku dayin xulashooyin kala duwan. Tusaale ahaan, xulashada xarfaha, Waa lagama maarmaan in ugu yaraan, aad sameysid isku-dar ah laba ama saddex farood oo naqshado kala duwan ah oo samee wadar ahaan toban sawir-gacmeed oo bilow ah. Markaad haysato, laba-laba jeer ayaad iska tuuraysaa markaad maskax ahaan is waydiiso oo aad ka jawaabto su'aalaha aasaasiga ah: maxay gudbiyaan, sidee bay u gudbiyaan, maxay u gudbiyaan.
Shaqaalayso agabka naqshadaynta
Xigasho: Mobile top
Marka aan ka hadalno kheyraadka, Waxaan ula jeednaa inaad isticmaasho barnaamijyada naqshadeynta ee ku habboon naqshadeynta tifaftirka, taas oo ah, in ay kuu ogolaanayso inaad si sax ah u habayn karto daboolyada iyo in wakhtiga dhoofinta, qaab kasta oo ay tahay, midabka midabka midabka iyo qaabka daabacaadda saxda ah ayaa la dhoofiyaa. Sababtan awgeed, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho barnaamijka xiddigaha, InDesign. Hadii aad rabto in aad wax badan ka barato barnaamijkan waxa aanu kugu casumaynaa in aad akhrido qaar ka mid ah qoraaladayada oo aanu si gaar ah uga hadlayno barnaamijkan iyo muuqaaladiisa. Marka la soo koobo, dooro barnaamij sax ah.
Qeybihii hore, waxaan kuu sheegnay in shabakadu ay naga caawiyaan inaan si wanagsan u qaybino una habayn lahayn waxyaabaha aan ku dari doonno daboolkayaga. Oo waa run, maadaama ay hubiyaan in mid kasta oo iyaga ka mid ah uu ku jiro dheellitirka muuqaalka qumman oo sidan oo kale ah waxay abuuraan dareen is-waafajin iyo dheellitirka daawadayaasha. xuubabka se waxay ku abuuri karaan labadaba barnaamijyada sida InDesign ama Illustrator. Intaa waxaa dheer, waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah shabakadaha, waxa muhiimka ah waa in aad sidoo kale sameysid sawirro kala duwan oo shabakado ah, iyada oo ku xidhan sida naqshadeynta majaladdaadu noqon doonto, habkan waxaad ku hubin doontaa inay shaqeyso iyo in kale.
Samee tijaabooyin daabac
Waxaan helnaa cabsi badan marka aan si lama filaan ah u rabno inaan daabacno majaladdayada oo aan ogaanno inaanan dooran qaabka daabacaadda ku habboon ama waxaan u muujinnay qaab aan habboonayn daabacaaddayada. Taasi waa sababta ka hor inta aan la siinin go'aanka, samee imtixaano daabacaado kala duwan, waa mid aad muhiim u ah haddii aadan weli aqoonin adduunka nidaamyada daabacaadda iyo sifooyinkooda. Sidan ayaad uga fogaanaysaa dhibaatooyinka waaweyn oo aad abuurto mashaariic si sax ah loo qorsheeyay.
Intaa waxaa dheer, waxaad had iyo jeer weydiin kartaa shirkaddaada daabacaadda midka ugu habboon mar kasta ka hor inta aanad wax fursad ah helin.
Marka aynu nashqadeyno majaladda, waa in aynu ka fikirnaa mid kasta oo kamid ah curiyayaasha uu ka kooban yahay, waana sababta aynaan wax u samaysan karin innagoon marka hore ogaanin. Haddii majaladda aysan soo jiidan dareenka laga soo bilaabo markii la arkay markii ugu horeysay, naqshadeynteedu waxaa laga yaabaa inaysan ahayn mid sax ah ama sida ugu badan ee la filayo.
Waxaa muhiim ah in aad si fiican u taqaano naqshada joornaalka ka hor inta aanad bilaabin si aad u abuurto mid adiga kuu gaar ah oo wax walba ka sarreeya aad ku dhiirigeliso naqshadaynta dadka kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo sameeyo daboolka majaladda hal-abuurka leh